Huawei နဲ့ Xiaomi တို့ကြောင့် ဆက်တိုက်ရောင်းအားကျနေတဲ့ Apple နဲ့ Samsung
8 Nov 2018 . 1:10 PM
၂၀၁၈ ဟာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကြီးစိုးတဲ့နှစ်လို့ပဲ ပြောရမလား Q3 တတိယသုံးလပတ် (ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ) မှာလည်း Apple နဲ့ Samsung အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရင်အပတ် အာရှဈေးကွက်ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် Apple ရော Samsung ရော ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရောင်းအားကျဆင်းခဲ့ပါတယ်၊ အခုတစ်ခါထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလာဒ်အတိုင်းပြောရရင် အနောက်ဥရောပဈေးကွက်မှာလည်း အခြေနေမကောင်းဘူးလို့ Kantar World Panel ထောက်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
ဒါတောင် iPhone XS ၊ XS Max နဲ့ Galaxy Note9လို တကယ့် Premium Smartphone ကောင်းတွေ မိတ်ဆက်ထားတာတောင် မကာမိဘူးလို့သိရပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးမှာ ရောင်းအား ၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းစီ တအိအိကျဆင်းနေပြီး ဈေးလည်းသက်သာ၊ Flagship နီးနီးကောင်းမွန်တဲ့ Huawei ၊ Xiaomi Smartphone ကောင်းတွေကြောင့် ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကျဆင်းလာတယ်လို့ Kantar ထောက်ပြထားပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ ဥရောပနိုင်ငံသားအများစုဟာ ဖုန်းအသစ်ဝယ်တာထက် ရှိပြီးသားဖုန်းကိုပဲ အချိန်ကြာကြာအသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တခါဝယ်ပြီးသွားရင် တော်ရုံအသစ်ဝယ်ဖို့ မစဉ်းစားကြသလို Specs လည်းကောင်း Feature လည်းစုံတဲ့ P20 စီးရီးလို စမတ်ဖုန်းမျိုးနှစ်ခြိုက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလစစ်တမ်းအရ ဥရောပမှာ Samsung Galaxy S9 ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး Sony ၊ LG စမတ်ဖုန်း Brand တွေကို Huawei ၊ Xiaomi တို့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ရောင်းအားကျဆင်းလာတဲ့ အကြောင်းပြချက်တခုက Budget to Mid-range စမတ်ဖုန်းတန်းမှာ Premium အရည်သွေးနဲ့ ရောင်းချနေတဲ့ တရုတ်စမတ်ဖုန်းတွေကြောင့် နေရာမရဖြစ်နေတာလို့ သိရပါတယ်။
Huawei နဲ့ Xiaomi တို့ကွောငျ့ ဆကျတိုကျရောငျးအားကနြတေဲ့ Apple နဲ့ Samsung
၂၀၁၈ ဟာ တရုတျကုမ်ပဏီတှကွေီးစိုးတဲ့နှဈလို့ပဲ ပွောရမလား Q3 တတိယသုံးလပတျ (ဇူလိုငျ၊ သွဂုတျ၊ စကျတငျဘာ) မှာလညျး Apple နဲ့ Samsung အရှုံးပျေါနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
အရငျအပတျ အာရှဈေးကှကျထုတျပွနျခကျြအရဆိုရငျ Apple ရော Samsung ရော ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ရောငျးအားကဆြငျးခဲ့ပါတယျ၊ အခုတဈခါထှကျပျေါလာတဲ့ ရလာဒျအတိုငျးပွောရရငျ အနောကျဥရောပဈေးကှကျမှာလညျး အခွနေမေကောငျးဘူးလို့ Kantar World Panel ထောကျပွခကျြအရ သိရပါတယျ။
ဒါတောငျ iPhone XS ၊ XS Max နဲ့ Galaxy Note9လို တကယျ့ Premium Smartphone ကောငျးတှေ မိတျဆကျထားတာတောငျ မကာမိဘူးလို့သိရပါတယျ။ ဥရောပနိုငျငံအသီးသီးမှာ ရောငျးအား ၁.၆ ရာခိုငျနှုနျးစီ တအိအိကဆြငျးနပွေီး ဈေးလညျးသကျသာ၊ Flagship နီးနီးကောငျးမှနျတဲ့ Huawei ၊ Xiaomi Smartphone ကောငျးတှကွေောငျ့ ဈေးကှကျဝယျလိုအားကဆြငျးလာတယျလို့ Kantar ထောကျပွထားပါတယျ။
လလေ့ာခကျြတှအေရ ဥရောပနိုငျငံသားအမြားစုဟာ ဖုနျးအသဈဝယျတာထကျ ရှိပွီးသားဖုနျးကိုပဲ အခြိနျကွာကွာအသုံးပွုတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး တခါဝယျပွီးသှားရငျ တျောရုံအသဈဝယျဖို့ မစဉျးစားကွသလို Specs လညျးကောငျး Feature လညျးစုံတဲ့ P20 စီးရီးလို စမတျဖုနျးမြိုးနှဈခွိုကျကွတယျလို့ သိရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလစဈတမျးအရ ဥရောပမှာ Samsung Galaxy S9 ရောငျးအားအကောငျးဆုံးဖွဈ ရပျတညျနခေဲ့ပွီး Sony ၊ LG စမတျဖုနျး Brand တှကေို Huawei ၊ Xiaomi တို့ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အခုလို ရောငျးအားကဆြငျးလာတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတခုက Budget to Mid-range စမတျဖုနျးတနျးမှာ Premium အရညျသှေးနဲ့ ရောငျးခနြတေဲ့ တရုတျစမတျဖုနျးတှကွေောငျ့ နရောမရဖွဈနတောလို့ သိရပါတယျ။
by 2B . 12 mins ago